Platô - Wikipedia
I Platô na Platôna dia filôzôfa tao Grisia tamin' ny Andro Taloha, izay niaina tamin' ny vanimpotoan' ny demôkrasia ateniana sy tamin' ireo Sôfista izay notsikerainy. Notohizany ny asa ara-pilozofian' ny mpialoha lalana azy sasany, indrindra i Sôkraty izay nampianatra azy, i Parmenida, i Heraklita, ary i Pitagôra, mba hamolavolany ny fiheverany manokana. Izany fiheverany iany dia mitrandraka sehatra lehibe, dia ny metafizika, ny etika, ny estetika ary ny pôlitika
Ny asany izay nahitana saika resadreesaka avokoa, dia namoaka ireo famehezan-teny momba ny petrak' olana mahazatra teo amin' ny tantaran'ny filôzôfia tandrefana. Ny resadresaka tirairay tataon' i Platô dia nahafahany nanontany ny amin' ny lohahevirta voafaritra iray, ohatra amin' izany ny amin'ny kanto sy ny herim-po. Novelabelariny ny fomba fiasa iay nantsoiny hoe dialektika na maieotika. Natokany tamin'ny filôzôfia voalohany ny ankabeazan'ny fandinihana nataony, nefa niompany koa fisehon-javatra ivelambelany ary nitondra ny anjara birikiny tamin'ny fandinihana ny Tantaran natoraly koa izy, izay niezahany nametraka ireto ainga fototra roa ireto: ny voalohany iharana, toy ny raha (matiera), ny faharoa mpanao (toy ny anton-javatra), izay ampifandraisiny amin'ny herin'ny andriamanitra sy ny an'ny Tsara.
Namelabelatra fisaintsainana momba ny Hevitra izay atsoina hoe teorian'ny Endrika na teorian'ny Hevitra izay ilazany fa ny zava-misy tsapa dia vondron-javatra mitovy endrika amin'ny môdelin'izy ireo tsy mety miova. Ny Endrika fara tampony, arakaraka ny zava-misy manodidina, dia mbetika ny Tsara, mbetika ny Kanto. Ny filôzôfia pôlitikan'i Platô dia mihevitra fa ny Tanàna anjakan'ny rariny dia tokony haorina araka ny môdelin'ny Kanto hoazy. Novelariny vokatr'izany ny amin'ny Filôzôfa mpanjaka.
Ny fiheveran'i Platô dia tsy tokana bontolo. Ny sasany amin'ireo resadresaka nataony dia mifarana amin'ny apôria ara-pilôzôfia: nitondra vahaolana amin'ny olana napetraka izy ireo, nefa tsy valinteny tokana sady farany izany. Niteraka adihevitra lava teo amin'ireo mpanao fivoasana ny hahafantarana na manao filôzôfia dôgmatika (mitompo teny fantatra) i Platô na filôzôfia skeptika (misalasala).
Amin'ny ankapobeny i Platô dia heverina ho iray amin'ireo filôzôfa tandrefana voalohany, na raha tsy izany, ho ny mpamorona ny filôzôfia, ka nahatonga an'i Alfred North Whitehead hilaza hoe: "ny filôzôfia tandrefana dia tsy inona fa fifanjohia-naoty ambany pejy momba ireo resadresak'i Platô". I Teofrasta , raha niresaka momba ny filôzôfa, dia nilaza an'i Platô ho ny voalohany amin'ny lazany sy ny fahaizany, sady farany ao amin'ny filaharana ara-potoana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Platô&oldid=998285"
Voaova farany tamin'ny 29 Oktobra 2020 amin'ny 13:57 ity pejy ity.